Egypt | Freedom News Group
မူဘာရက် နှင့် သားနှစ် ဦး ကိုဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်း
မူဘာရက် က သူ့ အရိုက်အရာ ဆက်ခံရန် စီစဉ် ထားသည့် သား နှစ်ဦး သည် ယခု သမ္မတ နှင့် ဒု-သမ္မတ မဖြစ်ဘဲ ထောင်နန်းစံ ရတော့ မည် Photo-New York Times
အီဂျစ် သမ္မတ ဟောင်း ဟိုစနီ မူဘာရက်
နှင့် သူ၏ အရိုက်အရာ ဆက်ခံ နိုင်ရန် စီစဉ်
ထား ရှိ သည့် သားဖြစ်သူ ဂါမယ် မူဘာရက်
နှင့် သားနှစ်ဦး တို့ အား အီဂျစ် တရား ရုံး မှ
ယနေ့ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ပြန် ပေးမှု အရ ယနေ့ 
ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်း လိုက် သည် ဟု အီဂျစ်
တရားရေးဌာန ၏ ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ
တွင် သတင်း ဖော်ပြ ထားသည်။ ပြည်သူများ၏ အုံကြွ တွန်းလှန်မှု ကြောင့်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက် နေ့ က သမ္မတ ရာ
ထူးမှာ စွန့် လွှတ်ပေး ခဲ့ရသည့် မူဘာရက်သည်
ယမန်နေ့ က ၎င်း နေထိုင် ရာ ရှမ် အယ်(လ) ရှိတ် ရှိ
ဆေးရုံ တစ်ခု တွင် နှလုံး Read more
Will the protests that have swept the Middle East inspireasimilar movement in
China, or is that country’s middle class more interested in the material than the political?
Agence France-Presse/Getty ImagesSurveys show thatamajority of Chinese feel their lives have gotten better economically in recent years. Above,aworker ataconstruction site in Suining, China. Over the course of three short months, popular uprisings have toppled regimes in Tunisia and Egypt, sparkedacivil war in Libya and created unrest in other parts of the Middle East. They also have raisedaquestion in many people’s minds: Are all authoritarian regimes now threatened by this new democratic wave? In particular, is China,arising superpower, vulnerable to these forces? Read more
3 Comments	သတင်း အကျဉ်းချုပ်များ
LATEST မြန်မာ နိုင်ငံတွင် လူထု အုံကြွမှု ဖြစ်လျှင် ကွန်နက် ရှင် မလို ပဲ အင်တာနက် ဆက်သွယ် နိုင် မည့် နည်းပညာကို ဂြိုလ် တု မှ တစ်ဆင့် ဂူဂဲလ် အင်တာနက် ကုမ္ပဏီမှ စီစဉ် ပေးမည် .Source : Techcrunch်
လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ ကို ဖယ်ရှားဖို့ အမေရိကန် စပြီ
သူဌေး ဦးတေဇ ကို ရဲခဲတောင် မှ ကယ်တင် နိုင်ပြီ
နေရွှေသွေးအောင် က သင်္ကြန် မဏ္ဍပ် မလုပ် တော့ ဘူး ဟု ဆို
နေရဲမာန် ကတော့ မဏ္ဍပ် အကြီးကြီး ဆောက်မည် ဟု ဆို
ရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းများ တစ်စည် ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျော်သွားပြီ
လူထု အုံကြွ မှု ဖြစ်ပေါ် ရန် မှ သေချာ သလောက်ရှိ ဟု နေပြည်တော် စစ်ဗိုလ်ချုပ် အချို့ သုံးသပ် သင်္ကြန် တွင်း လည်ပတ် ရန် မြန်မာ လူမျိုးတို့ ကြောက်ရွံ့ နေ
အထက်ပါ သတင်းအကျဉ်းချုပ်များ ကို မကြာခင် ဖော်ပြပေးသွားမည်
The Lede: Latest Updates on the Uprising in Libya (thelede.blogs.nytimes.com)
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Feb 13
ယီမင် ဆန္ဒပြသူများ သမ္မတ အိမ်တော် ကို ၀ိုင်းပြီ
အီဂျစ် စစ်တပ် က လူထု အုံကြွမှု တွင် ကျဆုံး ခဲ့သူများ အား အာဇာနည် အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး
ဗြိတိသျှ ပေါင်ငွေ ဘီလျှံ ၁၀၀ ကို ဒဏ်ရာရသူများ၊သေဆုံးများအတွက်ရံပုံငွေ စီစဉ် ၍ ထောက်ပံ့ အာရပ် နိုင်ငံများ ပြောင်းလဲရေး တွင် အဓိက ကျသည့် ဆိုရှယ် မီဒီယာ တစ်ခု (Photo by John Moore/Getty Images)
စည်သူ၊ ၊ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့နေ့ လည်တွင် ယီမင်ဆန္ဒပြမှု များသည် ပိုမိုအားကောင်း
လာပြီး လူထုအုံကြွမှု အသွင်ဆောင်ကာ ယီမင် သမ္မတ အလီ အဘဒူလ် ဆာလား ၏ အိမ်တော် သို့ 
ချီတက်ကြပြီး ယခုချက်ခြင်း နှုတ်ထွက်ပေးရန် တောင်းဆိုကြသည် ဟု ဆန္ဒပြ သူများ ၏ တွစ်တာ
သတင်းမျှဝေမှု တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Read more
9 Comments	အီဂျစ် ပြည်သူများက အာဏာရှင် ဟိုစနီ မူဘာရက် အားအောင်မြင်စွာ ဖြုတ်ချနိုင်
Latest: မူဘာရက် သစ္စာ ခံ ဗိုလ်မှုးကြီး တစ်ဦး(ဆန္ဒပြ သူများ ကို အကြမ်းဖက်သည့် အဖွဲ့ ခေါင်း
ဆောင်) ကို တင့်ကား တပ်မှ ဖမ်းဆီး ၊ မူဘာရက် နှုတ် ထွက်ပြီး နောက် ရေနံစိမ်းများ ကျဆင်း
“အခု …..နှုတ်ထွက် မယ်…တော်ကြာ…နှုတ်ထွက်မယ်…နောက်မှ နှုတ် ထွက် မယ်မလုပ် နဲ တော့ ….ခင်ဗျားကြောင့် တိုင်း ပြည်လဲ သွက် ချာ ပါဒ လိုက်နေ ပြီ ..အခု တစ်ခါတည်း သာ
နှုတ်ထွက် စာ မှာ လက် မှတ် ထိုးပြီး အိုမာ ဆူလေမန် ကို ပေးခဲ့”
အီဂျစ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် က အီဂျစ် စံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီ ခန့် က အာဏာရှင် သမ္မတ
နှင့် တွေ့ ဆုံရာ တွင် ပြောကြား သည့် စကား
Updates: နောက်ဆုံးရရှိသည့် သတင်းများ အရ မူဘာရက် သည် Cairo မြို့ မှာ ထွက်ခွာသွားပြီ ဟု
သတင်းရရှိသည်။သူ၏ မိသားစု က မူ အီဂျစ် နိုင်ငံမှ ထွက် ခွာ သွားပြီ ဖြစ်သည်။
အီဂျစ် စစ်တပ် သည် အာဏာကို ခေတ္တမျှ သာထိန်းသိမ်း ထားမည် ဖြစ်ပြီး
လူငယ် များ နှင့် အတိုက်အခံ များ ပါသည့် ယာယီ ကြားဖြတ် အစိုးရ က ကို ဖွဲ့ စည်းပြီး နောက်
တရားမျှ တ၍ လွတ်လပ် သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကို မကြာခင် ကျင်းပပေးမည် ဟု အယ်အာရေး
ဘီးယား သတင်းဌာန သို့ ပြောသည်။Video 21:19 minutes
မူဘာရက် အား ရာထူးမှ ဖယ်ရှား ပြီ
သံချပ်ကာကား အတွင်း အိပ်ပျော်နေသည့် အီဂျစ် စစ်သား တစ်ဦး Photo-Egypt
တင်ကျော်ကျော်စိုး၊ ၊အီဂျစ် နိုင်ငံတွင် ၁၂ ရက်မြောက်နေ့ အဖြစ် ပြည်သူ တို့ ၏ ဆန္ဒပြပွဲ များ စတင်ချိန် တွင် ယနေ့ အီဂျစ် နိုင်ငံ ၏ အစိုးရ အဖွဲ့ ဝင် အရာရှိကြီးများ ၊
အမေရိကန် အစိုးရ အဖွဲ ၊အီဂျစ် ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားများ နှင့် စစ်တပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ
ဖြစ်သည် ဟု နယူးယောက်တိုင်း သတင်းစာတွင် ရေးသားထားသည်။
ဆန္ဒပြပွဲ များကြောင့် တစ် နေ့ကို ဒေါ်လာ သန်း ၃၁၀ ခန့် အီဂျစ် နိုင်ငံ တွင် ဆုံးရှုံး နေရခြင်း ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် မူဘာရက် အား နှုတ်ထွက် ရန် ဆွေးနွေ ညှို နိုင်း ဖိအားပေး နေရ
သည်ဟု အီဂျစ် ထိပ်တန်း အစိုးရ အရာရှိ တစ်ဦးက နယူးယောက် တိုင်း သတင်းစာသို့ ပြောသည်။ Read more
10 Comments	မူဘာရက် ကို ဖြုတ် ချ ခြင်း (live update)
အလက်ဇန္ဒြီးယား အုံကြွမှု ပိုမိုပြင်းထန်လာ
အီဂျစ်စစ်တပ် က ဆန္ဒပြသူများ ကို အကြမ်းဖက်သည့် မူဘာရက် သစ္စာခံသူ များ ကို ဖမ်းဆီး ယူတု က တင်ရလွယ်သည့် စီတီဇင် တု နှင့် ရီပိုတာစင်တာ ကို အီဂျစ် တော်လှန်ရေး အတွက်ထွင်
10:00 ဆန္ဒပြသူများ ယနေ့ တီဟီရာ ရင်ပြင် တွင် ပိုမို စုရုံးလာကြ(နိုင်ငံတကာ ရှိ အီဂျစ်သံ
ရုံးများ ကို ပိတ်ဆို့ ဆန္ဒပြနေကြ)
09:50 အီဂျစ် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုဟာမက် ဟူစိန် က ဆန္ဒပြ သူများ ကို
လာရောက် တွေ့ ဆုံ အားပေး
၀9:00 ဆူလေမန် လက်ရှိ ဒုသမ္မတ က မူဘာရက် သည် ကျွန်တော် တို့ ၏ ဖခင်ကြီးဟုဆို
အီဂျစ် ပြည်သူများက အာဏာရှင် မူဘာရက် အား Operation Day of Departure အနေ ဖြင့်
ဖြုတ်ချ ပုံ ကို မြန်မာ ပြည်သူ များ သိရှိနိုင် ရန် အချိန် နှင့် အမျှ တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းမှု မှန် သမျှ ကို
စက္ကန့် မလပ် တင် ဆက်ပေး သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Feb 3
အာဏာစွန့် ရန် အတွက် မူဘာရက် ကို တပ်မှုးများ က ဖိအားပေးနေပြီ
Mubarak: ‘If I resign today there will be chaos’
19:00 မိမိ နှုတ်ထွက်လျှင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေများ ပိုမို ဆိုးရွားသွားမည် (မူဘာရက်)
17:00 McCain Says It’s Time for Mubarak to Leave
13:45 လွတ်မြောက်ရေး ရင်ပြင်တွင် ပစ်ခတ်မှုများ ရှိ ၊၀န်ကြီး ချုပ်က အဓိကရုဏ်း
တွင် သေဆုံးဒဏ်ရာရမှု များအတွက် တောင်းပန်
12:00 မူဘာရက် လိုလားသူများက ဆန္ဒပြသူများကို ထပ်မံတိုက်ခိုက်
09:35 ဆီးရီယား တွင် အထွေထွေ သပိတ် စတင်ရန် Facebook မှဆော်သြရာ တစ်နာရီအတွင်း
လေးသောင်း ကျော် ပါဝင် လက်မှတ် ရေးထိုး 09:15 ညွန့် ပေါင်း အစိုးရ သစ် ကို လွတ်မြောက်ရေး ရင်ပြင် ဉ်ဖွဲ့ ပြီးလျှင် တင့်ကား တပ်ခြံရံမှု
ဖြင့် သမ္မတ နန်းတော် သို့ ချီတက်တာ မူဘာရက်ကို ဖယ်ရှားတော့မည်။
မူဘာရက်၏ မိန်းမ က မူလေယာဉ် ကွင်း ရောက်နေပြီ ဖြစ်သည်။
Egypt Time 09:00 ငြိ်မ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများ ကို လာရောက်နှောင့်ယှက်လျှင် မူဘာရက်
သစ္စာခံ များ ကို ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီး မည်ဖြစ်ပြီး မူဘာရက် ကို ပါဖမ်းမည် ဟု တင့်ကား တပ်မှုးပြော
အာရပ် အာဏာရှင်များမှာ ပြည်သူလုထု ၏ ဒေါမာန်ဟုန် နှင့် ရင်ဆိုင်နေရ ရာ သွေးပျက် ထိတ် လန့် ၍ ချူနာပါနာ ကျနေပြီ ဖြစ်သည်။ ပုံတွင် အာရပ်အာဏာရှင်များ ကို တွေ့ ရမည် ဖြစ်သည်။အခုတော့ဒီဆရာကြီး တွေ လဲ ကာလနာ မြွေးပွေး ကိုက်နေပြီ့ Foreign Policy မှာ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း အာဏာရှင်များ နှင့် အမေရိကန် သံတမန် ရေး ပုံများ ကိုကြည့်ရန် Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Feb 2
3 Comments	အီဂျစ် ဆန္ဒပြသူများ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံ
Burmese Democracy Leader Backs Egypt Protestors
DVB Burmese democracy icon Aung San Suu Kyi told anti-regime protesters in Egypt on Tuesday that “we’re all with you”, as hundreds of thousands of people took to the streets in Cairo.
Inalive question and answer session on BBC World Service radio, the Nobel peace laureate, who has fought the military regime in Burma for decades, said she was “very interested” in the situation and urged protesters to stay strong Read more
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,726,644 hits